Ithegi: thinaire | Martech Zone
Ukuqonda i-NFC: Unxibelelwano lwentsimi ekufutshane
NgeCawa, Meyi 8, 2016 NgoMvulo, Juni 25, 2018 UAdam Omncinci
Indawo yokuma eshukumayo iyaqhubeka ngokuqhubekekayo, kwaye kuphela ngabarhwebi abagcina utshintsho kunye nokuzibandakanya kwizicwangciso zabo zokukhuthaza kunye nokuzibandakanya banethuba lokuphumelela kwihlabathi lanamhlanje elikhuphisana kakhulu. Itekhnoloji yakutshanje yokwenza ukuba ibenkulu kukuNxibelelana kweNdawo ekufuphi (NFC). Yintoni uNxibelelwano lweeNdawo ezikufuphi? Unxibelelwano lwenkundla kufutshane netekhnoloji ebethelelwe kwizixhobo zamva nje zeselfowuni ezivumela unxibelelwano olukhuselekileyo (ngesiqinisekiso) phakathi kweselfowuni kunye
NgoLwesihlanu, Februwari 8, 2008 NgoLwesihlanu, Februwari 8, 2008 Douglas Karr
Ndonwabile ngo-Y! Phila-itekhnoloji emnandi! Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndiqhubeke ndiyibeke bukhoma kwindawo yam esecaleni! Xa ndisasaza, ungandibona ndisebenza kwi-ol 'laptop kanye ecaleni kwebar yam esecaleni. Ndiyenze njani? Kuthathe umsebenzi omncinci, kodwa ndiyifumene. Owona mqobo mkhulu wokudlula kukuba amaxwebhu kaJahoo!